Somaliland Today | Atlante
News and other matters of interest to Somali speaking community
Updated: 49 min 46 sec ago
Muuqaallo Iyo Sawirro Sir Ah Oo Lagu Qaaday Satellite-ka Oo Muujiyey Dal Hub Badan Siinaya Abiy Ahmed
(SLT-Addis Ababa)-Sawirro lagu qaaday satellite-ka oo ay heshay Al-Jazeera ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Imaaraadka Carabta ay taageero millatari oo baaxad leh siineyso dowladda Itoobiya ee dagaalka kula jirta mucaaradka Tigray-ga.
Baadhayaasha helay sawirrada ayaa isha ku hayey muddo saldhigyo ciidammada cirka ah oo ku yaalla Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya, waxayna heleen caddeymaha in ka badan 90 duulimaad oo isaga kala gooshay saldhigga Sweihan ee Abu Dhabi iyo kan Harar Meda ee koonfurta magaalada Addis Ababa, intii u dhaxeysay September iyo October 2021.
Asalka duulimaadyada badankood ayaa la qariyey ama la geliyey diiwaanka duulimaadyo kale oo caadi ah oo ayna laheyn.
Daabulaadda hubka ayaa waxaa qandaraas ku qaatay laba shirkad oo gaar loo leeyahay oo mid laga leeyahay Spain, taasi oo sameysay 50 duulimaad iyo mid laga leeyahay Ukraine oo sameysay 30, sida ay ogaatay Al-Jazeera.
Ma cadda haddii hubkan ay bixineyso dowladda Imaaraadka Carabta iyo haddii ay tahay un marin hubka ay marinayaan dowlado kale.
Dhaxal-sugaha Abu Dhabi, oo ah hoggaamiyaha dadban ee Imaaraadka Carabta Mohamed Bin Zayed, ayaa iska dhiga inuu yahay nabadeeyaha iyo dhex-dhexaadiyaha Geeska Afrika. Hase yeeshee shaac ka qaadistan ayaa tilmaameysa in Imaaraadka uu taageero xooggan ku siinayo Itoobiya dagaalka ay kula jirto Tigray-ga.
Arrintan ayaa imaneysa iyada oo dowladda Abiy ay bilihii tegay jab xooggan kala kulantay Tigray-ga oo hadda kusii siqaya caasimadda Addis Ababa, una jira wax ka yar 200 km.
Mid ka mid ah muuqaallada ay heshay Al-Jazeera oo laga qaaday saldhigga Itoobiya, ayaa muujinaya diyaarad u eg tan Shiinaha ay soo saaraan ee Drone-ka ah ee Wing Loong.
Dowladda Ethiopia ayaa kordhineysay dhowaanahan diyaardaha Drone-ka ee ay ka hesho Shiinaha iyo Turkey, si ay gacan sarreyn uga hesho Tigray-ga. Si kastaba, xannibaad la saaray warbahainta ayaa adkeysay in caddeymo loo helo illaa iminka.
Halkan hoose ka daalaco warkan Al-jaziir
Madaxweyne Mustafe Cagjar Oo La Waydiisay Wararka Sheegaya In Uu HARGEYSA U Yimid Inay Taageero Millatari Waydiistaan Somaliland
Sat, 27/11/2021 - 18:12
Coldoon Oo Maanta La Horkeenay Maxkmadda Gobolka Maroodijeex Iyo Eedaymaha Loo Haystay Oo La Dhagaystay
Sat, 27/11/2021 - 16:41
“Sifo Sharci-darro Ah Baa Lagu Gurtaa Ciida Gobolka Salel Oo Lagu Geeyaa Dalka Jabuuti…” Xildhibaan Maxamed Abiib
Sat, 27/11/2021 - 11:52
Madaxweyne Mustafe Cagjar Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyay Somaliland
Sat, 27/11/2021 - 11:48
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Dagaalka Itoobiya Xilli Ciidamada Dowladda Ay Sheeganayaan Inay Deegaano Ka Qabsadeen TPLF
Sat, 27/11/2021 - 08:11
(SLT-Addis Ababa)-Raysal wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed ayaa markii ugu horreesay kasoo muuqday warbaahinta maxaliga ee dalkaas tan iyo markii uu ku dhawaaqay in furimaha dagaalka ka hogaamin doono ciidankiisa oo guluf kula jira falaagada Tigreega ee TPLF iyo isbahaysigooda.
Dowladiisa ayaa shalay shaaca ka qaadday tallaabooyin lagu xaddidaya tebinta wararka colaadda xilli lagu soo waramaya in Tigreega ay ku sii dhaw yihiin magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya.
Faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogagga TPLF waxaa Jigjiga ka soo diray wariye Ismaaciil Buurgaabo.
Dalalka Jarmalka iyo Faransiiska ayaa noqday dalalkii ugu dambeyay ee muwaadiniintooda kula taliya inay isaga baxaan dalka Itoobiya xilli ay sii xoogeysanayaan dagaallada sokeeye ee dalka ka dhacaya.
Wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa iyaguna dhawaan soo saaray tallooyin ay u jeedinayaan muwaadiniintooda ku sugan dalkaasi oo ku aaddan inay dalkaa isaga baxaan. Maraykanka iyo UK ayaa dhawaan soo saaray talooyin kuwaas la mid ah halka Qaramada Midoobayna ay bilowday daadguraynta shaqqalaha caalamiga iyo qoysaskooda.
Maayarka Caasimadda Hargeysa Oo Sheegay In Uu Heshiisyo Caalami Ah Soo Galay
Sat, 27/11/2021 - 08:06
Maayarka Caasimadda Hargeysa Oo Sheegay In uu Heshiisyo Caalami ah Shirkaddo Dawladda Hoose ka caawi doona Maaraynta qashinka, Dhismaha Wadooyinka, Fayadhawrka iyo Caafimaadka.
Maayarka Caasimadda Hargeysa Cabdikariim Axmed Mooge, ayaa sheegay inuu heshiisyo caalami ah la soo galay Shirkaddo Dawladda hoose ka caawi doona adeegyo kala duwan.
Maayarka ayaa sidan ka sheegay kulan toddobaadlaha ah Golaha Deegaanku iyo Guddoomiyeyaasha Degmooyinka.
“Kulanka Todobaadlaha ah oo Sabti Kasta Ka dhaca Hoolka Shirarka Dawladda Hoose oo ay ku kulmaan,Golaha Fulinta Dawladda Hoose Ee Hargaysa oo uu Hogaaminayo Maayarka Caasimadda Mudane Cabdikariin Ahmed Mooge,Gudoomiyayaasha Degmooyinka,Agaasimayaasha Waaxaha kala Duwan,Maamulka ShirkadahaNadaafadda
Waxaa Ka mid ah Qodobadii Ka soo Baxay Kulanka.
1. Maayarka Caasimadda oo warbixin Kooban Ka bixiyay Safaradii shaqo ee uu ugu maqnaa Dalka Dibadiisa,waxaana uu Maayarku sheegay in Heshiisyo Caalami ah uu La soo galay Shirkado Dawladda Hoose ka Caawin Doona Maaraynta qashinka,Dhismaha Wadooyinka,Fayadhawrka Caafimaadka.
2. In Istaanada Basaska ee ku dhex jira gudaha Caasimadda Loo Sameeyo Goob ku Haboon oo ay Dadka Ka qaadan.
3. In Caasimadda Hargaysa laga Bilaabo Dhiraynta Goobaha Muhiimka ah.
4. Dardargalinta Cashuuraha Si Kor loogu Qaado Waxqabadka Caasimadda.
5. Dhiirigalinta iyo Abaal marinta Shaqaalaha Dawladda Hoose gaar ahaan kuwii ugu shaqada badnaa.
6. Dayactirka Iyo Dib u dhiska Xaruumaha ay ku shaqeeyaan Maamulka Degmooyinka Caasimadda Hargaysa.”
Madaxweynaha Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Oo Maanta Safar Ku Yimaado Somaliland.
Sat, 27/11/2021 - 07:57
(SLT-Hargeysa)-Wefdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cumar, oo hadda ku sugan Wajaale ayaa la filayaa in ay maanta yimaadaan Hargeysa.
Sida qorshuhu yahay madaxweyne Mustafe Cumar, waxa uu la kulmi doonaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi.
Weli lama oga waxyaabaha labada madaxweyne ka wadahadli doonaan balse warar hordhac ah ayaa sheegaya in kulankooda ay diirada ku saarayaan arrimaha Ammaanka iyo qulqulatooyinka meelo geeska ah ka jira.
Magaalo xuduuda Degmada Tog.Wajaale ayaa si wayn looga dareemayaa soo dhawanta madaxwaynaha dowlada deegaanka Somalida Itoobiya.
Dowladda Itoobiya Oo Mareykanka Ka Codsatay In Uu Joojiyo Faafinta Wararka Been Abuurka Ah Ee Ka Dhanka Ah Itoobiya
Sat, 27/11/2021 - 07:49
(SLT-Addis Ababa)-Dowladda Itoobiya ayaa ka codsatay Mareykanka in uu joojiyo faafinta waxa ay ugu yeedhay wararka been abuurka ah ee ka dhanka ah Itoobiya, sida uu sheegay wasiiru dowlaha isgaadhsiinta dalkaasi Khamiistii shalay.
Itoobiya ayaa warkan soo saartay kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay soo saartay digniin ku saabsan “weerarro argagixiso”.
Sida ay shaacisay warbaahinta dowladda ee EBC, wasiiru dowlaha isgaadhsiinta, Kebede Dessisa, ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay tahay in ay ka fogaato baahinta “warar been abuur ah oo ceeb iyo sumcad dil ah, oo ku saabsan Itoobiya,”
Waxa uu soo hadal qaaday bayaan ka soo baxay safaarada Maraykanka salaasadii kaas oo ku booriyay muwaadiniinteeda in ay la yimaadaan feejignaan dheeraad ah, sababtuna ay tahay “suurtogalnimada weerarro argagixiso oo ka dhaca Itoobiya”.
Xukuumadda Raysal Wasaare Abiy Ahmed iyo xoogagga fallaagada ah ee ka soo jeeda gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi ayaa in ka badan hal sanno dagaallamaya, waxaana dagaalkaas uu galaaftay kumanaan qof, halka malaayiin kalena ku barakiciyeen dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika.
Toddobaadkan ayay dowladda Ireland sheegtay in Itoobiya ay eriday afar ka mid ah lix dublamaasi oo Irish ah, sababta oo ah mawqifka Ireland ee dagaalka Itoobiya.
Afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale ka digay hanjabaado dibadda ah oo aan la magacaabin, waxayna dowladaha reer galbeedka ku dhaleeceeyeen ‘wararka aan sax ahayn ee ku saabsan dagaalka.’
“Siyaasaddii Somaliland Ee Khiyaamadda Iyo Anaaniyadda Ahayd Wuu Ka Leexday Cabdiraxmaan Cirro…” Jamaal Cali Xuseen
Sat, 27/11/2021 - 06:19
Waxaan halkan ka qirayaa inuu Cabdiraxmaan Cirro badelay siyaasaddii Somaliland
Maahmaah ay leeyahiin dadka ku nool waddanka Trinidad and Tobago ee ku yaala Jasiiradaha Carribeanka ayaa tidhaahda: ” Eat little, and you will live long” taasoo micnaheedu yahay ” In yar cun aad in badan noolaatide”. Taasoo ka dhigan hadaad dadka wax uga tagto sumcadaadu Waxay noqonaysaa mid weyn oo in badan jirta oo waarta.
Qofku hadduu la yimaado siyaasad cusub waa loo haneeya Oo lagu hanbalyeeya. Siyaasaddii Somaliland ee khiyaamadda iyo anaaniyadda ahayd wuu ka leexday Cabdiraxmaan Cirro. Maanta isagoo aan kursigii Madaxweynaha fuulin ayuu fuliyey balantii uu la galay laba siyaasi Oo hore Ugu soo biiray xisbiggii uu aasaasay ee Waddani. Midi waa Gudoomiyaha Golaha Wakiiladda Oo uu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay siduu Ugu dedaali lahaa inuu Cabdirisaaq Khaliif ku guuleysto jaggadaasi. Mar labaadkii Wuxuu dhawaan ciyaaray shax siyaasadeed Oo wuxuu gudoomiyihii xisbigga ku wareejiyey Xirsi Xaaji Xasan. Labaddaba waxaan Ugu hanbalyeeynayaa jagooyinkaa loo doortay iyo inay la shuraakoobeen hogaamiye Ilaahay ka baqanaya Oo balantii uu la galay sideeddii uga soo baxay isagoon fuulinba kursigii Madaxweynaha.
Somaliland siyaasiyiin badan ayaa u haysta in ay siyaasaddu tahay khiyaamo iyo balan ka bax, laakiin kolka danbe Waxay ku danbeeyaan in ay cidla soo istaagaan Oo aanay cidiba dib u aaminin oo aanay ka biyeysan. Kuwaasina waynu soo aragnay Oo if iyo aakhiraba waxba may dhigan. Murashaxa madaxweynaha ee xisbigga Wadani mudane Cabdiraxmaan waan hanbalyeeynayaa waxaanan leeyahay kursiga Ilaahay baa hayee kolay nin if iyo aakhriba u diyaar garoobay baa tahay, balantii aad ka soo baxdayna kolay bulshadda in badan ayaa qiimeysa qofka kelmadiisa iyo qawlkiisa ilaaliya.
Shacabku waa in qofka balanta ka baxa ee beenalaha ah aanu yeelan waji danbe ee uu ummadda la soo hor istaago. Indhaha waa in la furo, siyaasadana la furfuro Oo sharciyadda dalka la dhowro Oo xisbiyadda xilligooda la doortay ee 10 ka sanadood aanay dhaafin. Haddii kale dimuqraadiyadda aynu ku faanayna Waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lisay. Kolay markaan dalka dib Ugu soo noqdo ayaan waxyaabo badan si qoto dheer uga hadli doonaa maadama aan in badan ka aamusnaa arrimaha siyaasadda. Kheyr Baan u rajaynayaa shacabka.
Qore: Jamaal Cali Xuseen
Guddoomiye Ku-Xigeenka Kaabsan Group Oo Tacsi Tiiraanyo Leh U Diray Marxuum Ganacsade Maxamed Alloore Oo Ku Geeriyooday Dalka Turkiga.
Thu, 25/11/2021 - 18:06
Anniga oo magacaygu yahay Cabdiwahaab Xaaji Cali Axmed ahna guddoomiye ku-xigeenka Kaabsan Group waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa waxgaradka, waayeelka, aqoonyahanka, qoyska, ehelada, qaraabada, asxaabta, iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Marxuum Ganacsade Maxamed Yuusuf ALLOORE oo ku geeriyooday dalka Turkiga.
Mar Kale aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan shirkadda Kaabsan Group waxa tacsi tiiraanyo gaadhsiinayaa qoyska uu ka baxay marxuun Ganacsade Maxamed Yuusuf ALLOORE oo ka mid ahaa aasaasayaashii shirkadda Isgaadhsiinta ee Telesom.
Waxaan marxuumka ALLE uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo, qoyska, ehelada, qaraabada, asxaabta uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo.
Cuqaasha Iyo Waxgaradka Dagmada Qurlugud Oo Taagero U Muujiyay Guddomiyaha Cusub Ee Xisbiga WADDANI Iyo Murrashaxa Madaxweynaha
Thu, 25/11/2021 - 11:20
Maleeshiyaadka Puntland Oo Dhaqdhaqaaq Ka Sameeyey Deegaano Bariga Sanaag Ah Iyo Ciidanka Qaranka Somaliland Oo Heegan La Galiyey
Thu, 25/11/2021 - 07:53
(SLT-Hadaaftimo)-Maleeshiyaadka Maamul Goboleedka Soomaaliya ee Ountland ayaa shalay illaa dorraad la arkayay iyaga oo bilaabay dhaqdhaqaaq ujeedadiisa ay ku sheegeen waftiyo kala duwan oo xukuumadda Somaliland ah oo maalmihii ugu dambeeyey gaalaa bixinayay Gobolka Sanaag gaar ahaan dhinciisa Bari.
Wararkii ugu dambeeyey ee warbaaintu ka helayso deegaanka Yube ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in deegaankaas dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo xoogan ay ka bilaabmeen kadib markii heegan buuxa la galiyey ciidamada qaranka Somaliland ee ku sugan deegaamadaasi iyada oo xogta lagu helay dhaqdhaqaaqyo ay sameeyeen maleeshiyaadka Maamul Goboleedka Puntland ee ku sugen deegaamo ka mid ah cidhifka fog ee Sanaag Bari.
Warbaahinta Maamul Goboleedka Puntland ayaa shalay baahiyey warar la xidhiidha dhaq-dhaqaaq ay sheegeen in ciidanka Somaliland uu halkaasi ka sameeyey isaga oo ku wajahan dhinaca magaalada Hadaaftimo ee gobolka Sanaa gee Somaliland, xili ay halkaas meel u dhow fadhiisimo dhawaan ka samaysteen maleeshiyaad ka tirsan kuwa maamulka Puntland.
Ciidamada qaranka Somaliland oo horeba u sheegay in ay sugayaan xuduudda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa sannadihii ugu dambeeyey isku fidinayay saldhigyo waaweynna ka samaystay Bariga Gobolka Sanaag ee Jamhuuriyadda Somaliland waxaase marar badan carqalad keena maleeshiyadka deegaankan ku soo xad-gudba ee Puntland oo sheegta in ay hayb ahaan deegaankaasi iyaga u hoos tago iyaga oo iska indho mariya xuduudda caalamiga ah ee u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Sanaag gaar ahaan deegaamada Sanaag Bari ee Somaliland waxa ay intaasi ku darayaan in Maleeshiyaadka Puntland ay laftigoodu wadaan dhaq-dhaqaaqyo iyo abaabul ciidan, waxaana deegaanadaas laga dareemayaa cabsi weyn oo soo food saartay dadka ku nool kadib markii ay Puntland ku doodeen in ay ka hor tagayaan waftiyada ka socda Xukuumadda Somaliland ee deegaamaddaasi taga balse shacabka ayaa ku baaqaya in aanay Puntland carqaladayn nabadda ay dhulkani haystaan. Xubnaha deegaamadaasi u dhashay eek a tirsan maamulka Puntland ayaa eedo u soo jeediya mar walba masuuliyiinta Somaliland ee taga dhulkan Somaliland ka tirsan.
Imaaraadka Carabta Oo 10 Bilyan Oo Dollar Ku Maal-gashanaya Turkiga Iyo Nuxurka Heshiis Ay Galeen Kadib Sannado Loolan Iyo Xifaaltan Ah
Thu, 25/11/2021 - 07:51
(SLT-Ankara)- Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa kala saxeexday heshiis ku kacaya balaayiin doollar, oo ay qeyb ka yihiin taknoolajiyadda iyo tamarta kadib sannado ay xiisad siyaasadeed ka dhaxeysay labada dal.
Heshiiska ayaa lagu saxeexay magaalada Ankara kadib wada-hadallo ay yeesheen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhaxal-sugaha Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan.
Booqashada Sheikh Mohammed ee Ankara, oo aheyd tii ugu horreysay muddo toban sanno ah, ayaa timid ayada oo labada dal ay ka shaqeynayaan inay hagaajiyaan xidhiidhkooda, xilli ay jirto xasarad lacag oo ka taagan Turkiga, ayada oo qiimaha lacagta Lira ay hoos u dhacday.
Heshiiska ayaa waxaa kala saxeexday shirkadda horumarinta ee Abu Dhabi Development Holding (ADQ) iyo sanduuqa dhaqaalaha Turkiga ee Turkish Wealth Fund (TVF) iyo sidoo kale xafiiska maal-gashiga ee madaxweynaha Turkey.
Heshiisyada ayaa astaan u ah in labada dal ay u jiheysteen iskaashi kadib sannado ay ku dagaalamayeen saameynta gobolka tan iyo markii uu kacdoonkii gu’ga Carabta qarxay toban sanno kahor.
Sheikh Mohammed ayaa sheegay inuu wada-hadallo midho-dhal ah, oo ku aadan xoojinta xidhiidhka labada dal, la yeeshay Erdogan.
“Waxaan sugayaa inaan sahmino fursado iskaashi oo cusub oo u faa’iideeya labadeena dal, islamarkaana horumariya hadafyadeena horumarineed,” ayuu ku yidhi qoraal uu soo dhigay twitter.
Heshiiska labada dal ayaa ku kacaya 10 bilyan oo dollar oo Imaaraadka ay maal-gasho uga sameynayaan Turkiga.
Waa Kuma Ninka Abiy Ku Wareejiyey Shaqadii Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha?!
Thu, 25/11/2021 - 07:41
Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in talada dalka Itoobiya uu siihaynayo Ra’iisal Wasaare ku xigeenka Itoobiya Demeke Mokonnen, maadaama Abiyi Axmed uu hoggaaminayo ciidamada qaranka Itoobiya ee dagaalka kula jira TPLF.
Warkan oo kasoo baxay Xafiiska Warfaafinta ee Itoobiya, ayaa sidoo kale lagu sheegay in bulshadu qayb ka noqdaan baaqii dowladda, isla markaana sii dar dar galiyaan la dagaalanka TPLF.
Demeke Mokonnen ayaa ah ninka talo ahaan kusoo xiga Abiyi Axmed, waa Ra’iisal Wasaare ku xigeenka Itoobiya, ahna Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya, wakhti xaadirkana waxaa uu si ku meel gaar ah usii haynayaa talada dalka Itoobiya, iyo shaqooyinkii Abiyi Axmed.
Dagaalada ka soconaya qaybo kamid ah degaannada Axmaarada, Canfarta iyo Oromada ee dalka Itoobiya ayaa maalinba maalinka xigta sii xoogaysanaya, iyadoo dowladduna ay sheeganayso guulo waawayn, halka kooxaha hubaysan ee TPLF iyo OLA ay sheeganayaan war kaa kaduwan iyo inay kusoo siqayaan caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa.
Dalalka reer galbeedka ayaa intooda badan muwaadiniintooda uga digay inay tagaan dalka Itoobiya, iyagoo kuwa ku sugan gudaha Itoobiyana ku amray inay isaga soo baxaan Itoobiya, maadaama aan la isku halayn karin amniga dalkaasi, oo ay marba marka xigta dagaalladu sii xoogay-sanayaan.
Itoobiya ayaa maalmihii u dambeeyay waxay hawlgalisay Ciidamada Fadaraal Booliska, oo ah ciidan loogu talagalay sugidda amniga magaalooyinka, iyadoo maalinimadii shalayna uu Ra’iisal wasaaraha Itoobiya uu go’aansaday inuu hoggaamiyo Ciidamada Qaranka Itoobiya, kuwaas oo dagaal ba’an kula jira kooxaha isbahaystay ee TPLF iyo OLA.
Dalka Itoobiya ayaa intiisa kale iska deggan, marka laga reebo goobaha ay dagaalladu ka socdaan, sidoo kale magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya ayaa deggan, shaqooyinkuna ay sidoodii u socdaan.
Dad badan ayaa shaki ka qaba oo Itoobiyaan ah in Inqilaab ka dhici karo waddanka Itoobiya marka la eego xaaladda adag ee uu marayo iyo sida layaabka leh ee uu ninkan Abiy Axmed nin kale ugu igmaday hawl maalmeedkiisii dhinaca Madaxtooyada oo uu furinta dagaalka u tagay.
Maxkamadda Sare Ee Somaliland Oo Laashay Dacwaddii Ay U Soo Gudbiyeen Xildhibaanada Gabiley
Thu, 25/11/2021 - 07:38
(SLT-Hargeysa)-Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa Ooday dacwad ay u soo gudbiyeen mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka degmo/gobol Gabilay, kadib markii ay u cadaatay in aanay matali karin, wakaalad sharci ah oo xeerka waafaqsanna ka haysanin goleyaasha deegaanka ee dalka JSL.
24/11/2021-Maxkamadda Sare Jamhuuriyadda Somaliland ayaa Arbacada maanta go’aan ka soo saartay, dacwad Idaari ah oo ay u soo gudbiyeen, 7 mudane oo ka tirsan golaha deegaanka degmo/gobol Gabilay, kuwaasi oo ka cabanayay go’aan ay hore u soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland.
Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland markay daristay asbaabta racfaanlayaasha kala ah Mudane C/rashiid Haybe Faarax, Mudane Cali Muxumed Xasan, Mudane Axmed Wali C/laahi Kahliif, Mudane Cabdi Cali Xirsi, Mudane Caydaruus Muxumed Cumar, Mudane Axmed Ciisoow Axmed, Mudane Khaalid Maxamed Ismaciil, markay aragtay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland, taariikhdu markay ahayd 13/1/2021 kaasi oo nuxurkiisu ahaa in golayaasha deegaanka dalku aanay fadhi aan caadi ahayn qaban karin, kaasi oo ujeedadiisu tahay in xilka lagaga qaado maayirada iyo maayir ku xigeenada golaasha deegaanka dalka, markay aragtay in golayaasha deegaanka dalku ay leeyihiin urur leh qaab dhismeed oo ay ku midaysan yihiin, markay aragtay in qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland uu yahay mid guud oo khuseeya dhammaan dawladaha hoose ee dalka, markay aragtay in cabashada racfaanlayaashu aanay waafaqsanayn xeerka maadaama, racfaanlayaashu aanay matali karin, wakaalad sharci ahna ka haysan dhammaan golayaasha deegaanka dalka, maadaama uu qoraalka ay ka cabanayaan uu khuseeyo dhammaan golayaasha deegaanka JSL, markay aragtay Qod:- 10, 51, 119(7), 250, 259, ee xeerka habka madaniga iyo dhammaan asbaabta sare ku xusan awgeed Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland, waxay soo saartay qaraarkan;
Maxkamadda Sare ee JSL:
1. “ Waxay diiday arjiga asbaabta rafcaanka ee ku taariikhaysan 26/10/2021 ee ay Maxkamadda Sare JSL u soo gudbiyeen qareenada rafcaanlayaasha ee kala ah:- qareen Maxamuud C/raxmaan X. Nuur, qareen Sacad Yasiin Maxamuud, qareen Maxamed Maxamuud Xaashi, qareen Mubaarik Maxamuud Cabdi. Maadaama warqada ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaarada arimaha guddaha ay ahayd warqad guud oo ku socotay dhamaan golayaasha deegaanka dalka JSL sidaa darteed aanay rafcaanlayaashu ku matalin wakaalad sharci ah oo xeerka waafaqsanna ka haysanin goleyaasha deegaanka ee dalka JSL.
2. Waxay Ooday gal-dacwadeedkan waxaana la farayaa kaaliyaha sare ee Maxkamadda Sare JSL inuu gal-dacwadeedkan ka tirtiro diwaanka dacwadaha idaariga ah.
3. Qaraarkan wuxuu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 24/11/2021.”
1. Maxamed Cumar Geele Guddoomiye
2. C/qaadir Axmed Maxamuud Xubin
3. C/raxmaan X asan Nuur Xubin
Kaaliyaha Maxkamadda Sare JSL
Cumar C/wahaab Siciid
Somaliland Oo Olole Ictiraaf Raadin Ah MAREYKANKA Ka Wada – Yaa Ku Gacan Siinaya?
Thu, 25/11/2021 - 07:31
Mas’uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa caasimada dalka Mareykanka ee Washington ayaa kulan la qaatay Safiirkii hore ee dowlada Mareykanka u qaabilsanaa gobolka Saahil ee Afrika, Ambassador J. Peter Pham.
Wafdiga Somaliland oo uu hogaaminayo Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland, Dr Ciise Kayd Maxamuud ayna qeyb ka yihiin Marwo Edna Aadan iyo Wakiilka Somaliland ee Mareykanka ayaa waxay ka wada-hadleen dadaalada ictiraaf raadinta.
Ambassador J. Peter Pham oo inta badan ka hadla arrimaha khuseeya qadiyadda Ictiraaf-raadinta Somaliland iyo siday Somaliland xaq ugu leedahay inay Beesha Caalamku aqoonsato, ayaa halkaa kulan soo dhaweyn ah kula yeeshay Wafdiga ka socda Somaliland.
“Waan ku faraxsanahay inaan la kulmo wafdiga Jamhuuriyadda Somaliland ah oo booqasho ku jooga Washington, kuwaasi oo ay ku jiraan Wasiirka Arrimaha dibedda Dr. Ciise Kayd, Wasiirkii hore ee Arrimaha dibedda Somaliland Dr. Edna Aadan iyo Wakiilka Somaliland ee Maraykanka,” ayuu Peter Phamku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Sidoo kale waxa uu sheegay in caalamka uu si weyn ula habsaamay in uu aqoonsi buuxa siiyo Somaliland.
Wafdiga Somaliland ayaa sidoo kale waxay magaalada Washington kula kulmeen Safiirkii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa dalalka Gini iyo Ethiopia, Tibor Nagy.
Tibor Nagy ayaa si weyn usoo dhaweeyay wafdiga uu hogaaminayo Wasiirka cusub ee Arrimaha dibedda Somaliland, isagoona guul u rajeeyay dadaalada ictiraaf raadinta ee ay wadaan mas’uuliyiintaas.
Waxa kale oo uu diblumaasigani sheegay in Somaliland tahay meesha keliya ee xilligan uu War wanaagsan ka yimaaddo, marka la eegayo Afrika, islamarkaana uu ka jiro nidaam dimuquraadiyadeed oo nabdoon.
Dadaalada ictiraaf raadinta ee Somaliland oo muddooyinkii dambe uu ka muuqday gaabis badan ayaa xiligan markale ay xukuumadda Muuse Biixi dar-dar cusub ku billowday, waxaana hadda ka gacan siinaya Ambassador J. Peter Pham, oo asagu inta badan u ololeeya qadiyada gooni-goosaadka Somaliland.
Yey Tahay GABADHA Soomaalida Ee Loo Haysto Inay Dhacday Malaayiinka Dollar?
Thu, 25/11/2021 - 07:21
(SLT-Ottawa)-Waxaa maalmihii u dambeeyay si weyn baraha bulshada iyo qaar kamid ah warbaahinta caalamka looga hadal hayey Gabadh Soomaaliyeed oo lagu magaacaabo Safiya Nuur, taasi oo la sheegay in qaab khiyaamo ah ku dhacday lacago malaayiin doollar ah.
Gabadhaan oo haysata dhalasho Canada, asal ahaan ah Soomaali, ayaa waxaa lagu eedeynaya in hab kala duwan lacago uga dhacday dad caan ah oo ku sugan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka, kuwaas oo qaarkood ka mid ah jilayaasha Hollywood-ka.
“Lacagta ay Safiya ka qaadatay dadkaa waa mid ay ku beer laxowsatay, sida hooyadeed oo dhimatay oo ay dooneyso lacag ay ku aasto,” ayaa lagu yidhi warbixin uu daabacay wargeyska ka warama dadka caanka ah ee Vulture.
Sida ay baahiyeen warbaahinta caalamka Safiya waxay sidoo kale lacagahaas ku qaadatay inay dhibaato kala kulantay kufsi wadareed loo geystay.
Sheekada xatooyada ee lala xidhiidhinayo Safiya ayaa waxa kale oo la sheegaya in lacagahaas qaarkood ku qaadatay qaab amaah ahaan ah, ayada oo markii dambena la goosatay oo aan u celinin dadkii ay ka qaadatay.
Shakhsiyaadka caanka ah ee la sheegay in gabadhan ay la kulantay, laguna eedeeyay in lacago qaab khiyaamo ah uga qaadatay waxaa ka mid ah Jeff Wittek, Denzel Dion, Ricky Thompson iyo dad kale oo isugu jira atooreyaal, atariishooyin iyo dadka taageerayaasha badan ku leh baraha bulshada, gaar ahaan Youtube-ka.
Arrintaan ayaa waxay soo shaac baxday maalintii Khamiistii ee toddobaadkoo lasoo dhaafay, markaas oo ay taariikhdu ku beegneyd 18-kii November 2021-ka.
Tan iyo markaas waxaa isa-soo tarayay dadka sheeganayay in qaab xatooyo ah ay u dhacday, waxaana xusid mudan in dadka ka hadlayey arrinta Safiya Nuur ayna ahayn kuwo eedeynayay oo keliya, balse dadka qaar ay su’aal galinayeen saxnimada eedeynta loo jeedinayay.
Marka laga yimaado eedeymaha loo jeedinayo iyo hadal haynta arrintaas, illaa hadda ma jiro wax war oo kasoo baxay Safiya, oo ay iskaga difaaceyso eedeymaha xatooyo ee loo jeediyay.
Madaxda Xisbiyadda Mucaaradka Somaliland Oo Nairobi Kulan Kula Yeeshay Dalalka Iyo Hay’addaha Somaliland Ka Taageera Arrimaha Doorashooyinka.
Wed, 24/11/2021 - 12:07
Hoggaamiyeyaasha Mucaaradka Somaliland ayaa kulan Nairobi kula yeeshay Waddamada iyo Hay’addaha Somaliland ka taageera arrimaha Doorashooyinka.
Qabsoomida Doorashada madaxtooyada ee sannadka soo socda ayaa lagu gorfeeyay kulanka.
“Madaxweyne Biixi Uma Fikirayo Hab Qarannimo Ee Wuxuu U Fikiraya Si Local-Nimo Ah…” WADDANI Oo Si Kulul Uga Hadlay Masuul Ka Tirsan Xisbigooda Oo Lagu Xukumay 2 Sanno Oo Xadhig Ah
Wed, 24/11/2021 - 09:23